ज्ञानेन्द्रले सत्ता हडप्दा सात दिन जनताले दुःख पाए - नेपालबहस
गृहपृष्ठ रेमिट्यान्स/शेयरबजार ज्ञानेन्द्रले सत्ता हडप्दा सात दिन जनताले दुःख पाए
काठमाडौं । कुनै समय विदेशबाट नेपालमा पैसा भित्र्याउने कुरा असम्भव जस्तै थियो । बैंकबाट लामो प्रक्रिया पु¥याएर पैसा पठाउने कुरा सामान्य मानिसका लागि सहज पक्कै थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले घरमा रहेका आफन्तलाई पैसा पठाउने कुरा पनि करीब–करीब असम्भव जस्तै थियो । अवैधरुपमा हुण्डीको कारोबार फस्टाउँदा कालो धनको कारोबार पनि मौलाएको थियो । जसका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वसमेत गुमेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आर्थिक विवरणमा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड बराबरको विप्रेषण आएको थियो । विप्रेषण आयातमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका युवाले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मात्रै मद्दत गरेको छैन, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नसमेत मद्दत पुगेको छ ।
आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालका अनुसार सन् २००१ मा मलेसियाबाट रामशरण थापाले आफ्ना आफन्तलाई रु ५७ हजार रकम विप्रेषणबाट पठाएका थिए । “त्यो दिन पैसा पठाउने थापा जति खुसी हुनुभयो, त्योभन्दा बढी खुसी हामी भयौँ । किनकी हाम्रो सपना पूरा भएको थियो ।”, ढकालले भने ।
“वैधानिक रुपमा प्रविधिको प्रयास गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयासमा त्यो नै हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको विषय थियो, किनकी नहुने काम गर्न थाले, कसरी सम्भव होला भन्दै हामीलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुका लागि समेत त्यो एउटा चुनौती थियो । जुन हामीले सामना गरेका थियौँ,” ढकालले त्यही दिन सम्झनु भयो र भने, “कतिले त पैसा पठाएपछि हामीलाई लड्डू लिएरसमेत आउनुभयो ।”
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई दशक पहिले मलेसिया खुला गरेपछि वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आईएमई सो देश पुगेको थियो । “शुरुमा नेपालीलाई विश्वास दिलाउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो, व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँले कमाएको पैसा हामी सुरक्षित तवरले तपाईंको आफन्तलाई पु¥याइदिन्छौं भन्दासमेत पत्याउने अवस्था थिएन”, ढकालले भने, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा ठगिने क्रम पनि उस्तै थियो । घरखेत राखेर रोजगारीका लागि गएकालाई विश्वास दिलाउन ठूलै पापड पेल्नु प¥यो ।”
विगत फर्केर हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रबन्ध निर्देशक ढकाल भन्छन्, “वैधानिक रुपमा सहज तरिकाले विदेशीएका नेपालीले पठाएको पैसा नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्ने संस्कृति विकास गर्न सकिएको छ ।” वैधानिक तवरबाट विप्रेषण भित्रँदा त्यसले राज्यलाई समेत फाइदा भएको छ भने आम नागरिकलाई पनि सहज सेवा दिन सकिएको उनको भनाइ छ ।
“आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सबैभन्दा दुःखद् क्षण नै त्यही हो । नेपाली दाजुभाइ पैसा पठाउन काउण्टरमा लामबद्ध भएका छन्, नेपालमा इन्टरनेट काटिँदा सबैभन्दा दुःख लाग्यो । त्यही नै सबैभन्दा कठिन क्षण भयो मेरा लागि”, ढकालले स्मरण गरे । आम नेपालीले रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण पठाउने भन्ने बित्तिकै आज आईएमई सम्झनुको पछाडि लामो समयको मेहनत तथा उपभोक्तामैत्री सेवाको रुपमा अथ्र्याउँछन्, ढकाल । भारतबाट मात्रै सो संस्थाले मुतुड फाइनान्सको सहकार्यमा मासिक रु दुई अर्ब बढी विप्रेषण भित्र्याउँदै आएको छ ।
सूचना प्रविधिमा आएको ठूलो परिवर्तनले विप्रेषण व्यवसायलाई समेत सहज बनाएको छ । विदेशबाट एक क्लिकमा नेपालमा पैसा पाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ । आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल प्रविधिमा सुधार, उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्परागत प्रणालीमा समेत सुधार आएको छ ।
मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने नेपाली युवा पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देशहरुमा जान थालेका छन् । विप्रेषण भित्र्याउँदा लागत घटाएर कसरी बढीभन्दा बढी सरल मूल्यमा सेवा दिने भन्ने चुनौती थपिएको छ, पोखरेल भन्छन् । नेपाल विप्रेषक सङ्घका अध्यक्षसमेत रहनु भएका पोखरेल यस क्षेत्रमा अझै केही सुधारको आवश्यकता देख्छन् ।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए
अघिल्लो लेखचीनको विदेशी मुद्रा सञ्चय ३१ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर
अर्को लेखकांग्रेसका छायाँ मन्त्रीले पाए नियुक्ति पत्र, कुन मन्त्रालयको छायाँ मन्त्री को ?
राष्ट्र बैंकका ५ जना कार्यकारी निर्देशकहरुको जिम्मेवारी हेरफेर
राष्ट्र बैंकले ३५ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्दै
पुर्नकर्जा कोषको सीमा बढ्यो, कोरोना प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले ल्यायो यस्तो सुविधा
अब विकास बैंक मर्ज वा प्राप्ति गर्दा बाणिज्य बैंकलाई कुनै सुविधा नदिने राष्ट्र बैंकको तयारी
भारतीय यस बैंकका संस्थापक राना पक्राउ
यस बैंककाे वित्तीय अवस्था खराब, ग्राहकहरुमा अन्यौल !
एटीएमबाट दैनिक एक लाख निकाल्न मिल्ने